Ahoana ny fomba ahazoana ny fihenan'ny mpianatra Premium YouTube? - Tolotra
Ahoana ny fomba ahazoana ny fihenan'ny mpianatra Premium YouTube?
Vao haingana i YouTube no nampiditra ny drafitry ny fihenam-bidy ho an'ny mpianatra amin'ny famandrihana azy ireo any India sy firenena hafa. Ny mozika YouTube Premium sy YouTube dia misahana manokana ny fizarana horonan-tsary sy audio.
Ireo serivisy roa ireo dia misy amin'ny fitaovana Android sy iOS. Ireo mpianatra nisoratra anarana teny amin'ny anjerimanontolo sy oniversite nahazo fankatoavana dia afaka mampiasa ireo serivisy ireo amin'ny taha ambony. Ilay olona mahazo ny laharam-pahamehana amin'ny vidin'ny fihenam-bidy dia afaka miditra amin'ny kinova tsy misy doka amin'ny YouTube orina sy YouTube.
Iza no mendrika amin'ny fihenan'ny mpianatra Premium YouTube?
Ireo mpianatra nisoratra anarana tao amin'ny institiota fianarana ambony kokoa any India, ary firenena hafa dia afaka misoratra anarana amin'ny fihenam-bidy ho an'ny mpianatra YouTube. Na izany aza, ny famandrihana fihenam-bidy amin'ny kaonty premium dia manan-kery mandritra ny efa-taona.
Ny mpianatra koa dia mila manamarina ny kaontiny sy ny fahazoany mivoaka isan-taona.
Inona no tafiditra ao amin'ny fihenan'ny mpianatra Premium YouTube?
Ny mpianatra dia hahazo fitsarana maimaimpoana mandritra ny iray volana ary tsy mila mandoa afa-tsy ny antsasaky ny vola isam-bolana. Any India, YouTube Music dia tsy misy amin'ny Rs 59 isam-bolana fotsiny, ary ny serivisy horonantsary premium YouTube dia misy amin'ny Rs 79 isam-bolana.
Na izany aza, mbola tsy mazava ihany fa ireo vidiny fihenam-bidy ireo dia hitovy amin'ny fitaovana Android sy ny fitaovana iOS na tsia. Ilay mpianatra manana mpikambana premium dia afaka miditra amin'ny serivisy sy ny kinova tsy misy doka ary ny fampidinana mozika hijerena sarimihetsika sy hihainoana mozika ivelan'ny Internet.
Dingana ahazoana fihenam-bidy ho an'ny mpianatra Premium YouTube
Ny SheerID dia manamafy ny fanamarinana sy ny fahazoana alalana amin'ny YouTube. Alohan'ny hanasoniavanao sonia dia zahao raha tafiditra ao amin'ny pejy maha-mpikambana anao ao amin'ny YouTube Music Premium sy YouTube Premium ny sekolinao.
Raha tafiditra ao amin'ny sekolinao dia mandrosoa hisoratra anarana ary araho ireto dingana ireto:
Tsidiho ny tranokala YouTube Premium ary kitiho ny pejy fipetrahana. Manaraka, tsindrio ny Try IT Free.
Aorian'izany, hisy hafatra mipoitra eo amin'ny efijery izay alehanao hitodi-doha ho an'ny fanamarinana ao amin'ny SheerID aorian'izay dia mitohy ny tsindry eo.
Fenoy ny firenena, ny anaran'ny oniversite, ny anarana voalohany, ary ny anarana farany. Hamarino tsara fa fenoy ny adiresy mailaka sy daty nahaterahana. Kitiho ny boaty raha hanaiky ny fizotran'ny fanamarinana.
Avy eo tsindrio ny manaraka aorian'ny famenoana ny pitsopitsony.
Rehefa mameno ny fisoratana anarana ianao, indraindray ny SheerID dia mitady fampahalalana bebe kokoa toy ny scanner an'ny mpianatra, ny transcript ary ny antotan-taratasin'ny oniversite maro hafa. Mila mampakatra ny rakitra rehetra ianao ary tsindrio ny fandefasana.
Vantany vao mandefa ilay takelaka ianao, hoy i YouTube dia hahazo fanamarinana mailaka ianao ao anatin'ny 29 minitra. Indraindray dia maharitra 48 ora vao manamafy.
Raha mahomby ny fanamarinana ny kaonty, dia hamerina anao ao amin'ny pejy fisoratana anarana amin'ny kaonty premium YouTube ny SheerID.
Eto dia mila miditra amin'ny kaonty YouTube ianao.
Tsindrio ny piraofilina, safidio ny maha-mpikambana anao, ary araho ny torolàlana momba ny torolàlana eo amin'ny efijery.
Misafidiana fomba fandoavam-bola. Aorian'izany, kitiho ny fanombohana fitsapana iray volana. Raha vantany vao vita ny fitsarana maimaim-poana, dia hanome vola anao ny tapakila famandrihana isam-bolana amin'ny vidiny misy fihenam-bidy ny YouTube.
Izay izany ry zalahy! raha fantatrao ny fomba hafa ahazoana fihenam-bidy farany ambany Youtube Premium dia ampahafantaro anay amin'ny fizarana fanehoan-kevitra etsy ambany .. Misaotra tamin'ny famakiana
Fihenan'ny mpianatra hafa Azonao atao ny mijery:
BOSCH SEASON 7 | Daty famoahana | Plotline | Cast sy ny maro hafa
Tutflix – Vondrom-pampianarana maimaimpoana | Izay rehetra tokony ho fantatrao!
jereo ny andian-dahatsoratra maimaim-poana amin'ny Internet fizarana feno
fampiharana maimaimpoana toa ny pluto tv
ahoana ny hbo ankehitriny tsy mitovy amin'ny hbo go
ny fomba fanaovana ny kaontiko ho an'ny mpianatra
Kaody karatra fanomezana 5 amazona
ny fomba hahazoana karatra psn maimaim-poana tsy misy fanadihadiana